WQGS ngwenya angcolile Pump - China Shanghai SOG neeMpompo
WQGS and GWQ series non-ucingo iimpompo motor ontywiliselwe ayilwe ngqo, zenziwe yabalinga ngokuvisisana nemilinganiselo yesizwe isalamane, ukuba kuyimfuneko amanzi inkunkuma yorhwebo, amanzi inkunkuma yemihla ngemihla, inkqubo yemibhobho ehambisa amanzi amdaka sixeko.
lobushushu 1. Ambient: 0-40 ℃
2. lobushushu ulwelo Ubuninzi + 40 ℃
3. Inqanaba PH 4-10
4. Ubuninzi ulwelo mninzi 1.2 * 10kg / m³
5. Amandla frequency yi 50Hz. amandla ombane yi 220VAC wesigaba esinye
Ke 380VAC yesigaba ezintathu kuluhlu ukusuka -100% ukuya kwi-10%.
6. ubunzulu ukuntywiliselwa ukusuka 0.5m-5m
WQGS series non-ucingo ontywiliselwe iimpompo motor zisebenze ngenjongo yokulahla amanzi kakhulu angcolisekileyo inkunkuma-mveliso kunye neendawo zorhwebo, isikhululo ngawona ilindle kwindawo zokuhlala, inkqubo yokukhupha amanzi kwisixeko Kwiplanti yokucoca amanzi amdaka, ekufunxeni station for ukuziphendulela yoluntu, ubonelelo lwamanzi aphuma etephini isityalo amanzi, ugutyulo kukhululeka kuloo izibhedlele kunye neehotele, iziza zokwakha kweeprojekthi zikamasipala, ukuhlola, imigodi, zasemaphandleni methane pool, yokunkcenkceshela yezolimo njl ukunikezela amanzi amdaka kunye ezingcolisa equlathe granules, ngokunjalo namanzi acocekileyo kunye noosiyazi entsimbini.
1.Insulation iklasi: F
ngamanzi-resistant 2.The impeller ye QT 450-10 eziphathekayo.
3.Stainless ulwandiso shaft sentsimbi, khabhayithi -sides kabini uphawu ngoomatshini.
impeller 4.Double channel, umthamo flow elungileyo, umsebenzi oncomekayo hydraulic.
Uyazikhethela Ifumaneka kwi Isicelo
Okunye ombane okanye ukwenzeka into 60HZ
inombolo uhlobo flow entloko ngamanzi RPM I-Voltage Power ubude
Ufakelo umzobo onamacala of WQGS (GWQ) series non-close pump motor esisigxina kwamanzi.
Ufakelo, Operation and Maintenance Imiyalelo:
● Akuvunyelwe ukutsala neengcingo ngamandla kwi ufako nokususwa pump sombane ukuthintela iintambo ngokungekho mthethweni kunye delinking lokudibanisa akhokelela eqhelekileyo ukusilela ukusebenza kunye nokutsha;
● Nceda uqinisekise intambo earthing echanekileyo kwaye zithembekile nokufakelwa kwimpompo yombane. Akuvunyelwe abantu okanye izilwanyana ukuba aye ummandla wamanzi zokusebenza okanye ningawachukumisi impompo yombane xa isebenza. Ukwenzela ukunciphisa iingozi ugesi, oko bangathungelana kuphela plug earthing;
● umsebenzi Lokukhweliswa Akuvunyelwe;
● I-iintambo ezinxulumene iimpompo kufuneka bungabi ngaphantsi kwe-1.2 amaxesha indawo yokumpompa yombane;
● I-Impompo yombane kufuneka bawafaka ufakelo. Kodwa ke iintambo ayikwazi kugxininisiswe okanye uphendule, kunye impompo yombane nje iqalile kusini na;
● Xa impompo ongavelisi amanzi msebenzi, kufuneka impompo yombane ihlolwe nayiphi kujikelezo reverse okanye ivelufa yokukhangela emlonyeni ephuma kufuneka ihlolwe nayiphi na umoya intsalela;
● IsiGaba-to-kwisigaba nesiseko-to-phantsi yokugquma ukumelana relative motor of kwimpompo sombane kufuneka zihlolwe rhoqo kunye ukuxhathisa alithe gangqa 2MΩ. Kungenjalo, izixhobo kufuneka zezikhali ukuhlolwa kunye nolungiso;
● Emva kwisiqingatha sonyaka ka ukusebenza oqhelekileyo phantsi kweemeko ezichazwe ukusebenza, impompo yombane kufuneka zihlolwe ukuba imeko yokuvalwa igumbi oyile. Xa i oyile emulsified okanye sedimented amanzi ephuma, ioli umatshini 10 # kunye namalungu itywina ngomatshini kufuneka kutshintshwa ngexesha elifanelekileyo;
● umsebenzi wokulungisa Enye ezinkulu-scale kufuneka luqhutywe emva operation eqhelekileyo ngonyaka omnye: iindawo ezigugileyo kufuneka itshintshwe, izinto zokubopha kufuneka zihlolwe kunye igrisi kufuneka yongezwe kwaye endaweni ukuqinisekisa ukuthambisa ajikeleze ezigqwesileyo ekusebenzeni eqhelekileyo;
● Nceda ekucoceni impompo nombane kuzisula amaso xa singasetyenziswa.
Uhlalutyo kahle no Ukuphelisa
Iinkqubo zininzi analysis Cause iindlela wokukhutshwa eluhlwini
flow mibi okanye akukho manzi 1.mistaken into blade luhlengahlengiso ukulandelelana kwisigaba amabini iziphaluka amandla
2.openness nokuphelela valve iplagi ukuhlola valve
umoya 3.left kwi imibhobho phakathi ivalve kunye nempompo yenza kube nzima ukuba ukuvula ivalve ifeze umoya kwimibhobho
4.too speed ukujikeleza eliphantsi khangela unikezelo amandla isidanga ombane
uphawu 5.excessive ring lingonakali indawo
Ukuxinana 6.high okanye viscosity kwi engamanzi ukutshintsha lexinene viscosity lolwelo
7. umbhobho incakuba ukuvaleka ukuphelisa imiqobo imibhobho kunye iincakuba
operation nguZuma kwimpompo yombane kungalingani 1.blade indawo okanye asebenzise balancing ivili
umonakalo 2.bearing indawo
operation 3.overload lungisa umba ukuphepha electric pump sindisa
ufakelo 4.sliding ukufakwa kwakhona
elana low 1.leakage ekupheleni kweentambo of cable namandla kwiisekethe yanxitywa kwaye cinezela nuts zivale
umonakalo iingcingo 2cable okanye amanzi angena entlokweni indawo
3.mechanical ngophawu lingonakali indawo
4.O-ezimile itywina ring abagugayo kunye nokungaphumeleli indawo
ngoku kakhulu 1.low ombane ukusebenza lungisa ombane ukusebenza
ukuvaleka 2.blade okanye wanamathela-up imiqobo esicocekileyo imibhobho ulwelo
Ukuxinana 3.high okanye viscosity kwi engamanzi ukutshintsha lexinene viscosity lolwelo
4.excessive valve nokuvuleka lungisa valve nokuvuleka
ucingo Free angcolile Pump
Akukho Uphazamiseko angcolile Pump
Non-uvimba indle Pump
angcolile Water Pump
ngwenya angcolile Pump
Wqk angcolile Pump